IMaxwell Industry ikhiqize imishini yokusebenza phakathi kwemithi | UMaxwell
Umuthi yinto noma ulungiselela ukuvimbela, ukwelashwa noma ukutholwa kwezifo zabantu nemfuyo. Ngokwesisekelo somthombo, umuthi ungahlukaniswa ngemithi yemvelo neyenziwe. Umuthi futhi ungavimba izifo, welaphe izifo, unciphise izinhlungu, uthuthukise impilo, uthuthukise amandla emizimba yokulwa nezifo noma usize ekutholeni isifo.
IMaxwell Imboni ibhekisisa kakhulu ucwaningo nentuthuko yezokuphepha futhi inempilo yemithi ephakathi, ihlinzeka ngemishini ephezulu futhi enenkontileka yomkhakha ophakathi nemithi, imikhiqizo ihambisana nezidingo ze-GMP. Izinhlobonhlobo zifaka zonke izinhlobo zemithi ephakathi efana ne-aromatic
IMaxwell Industry inomlando omude wokukhiqiza imishini yokuhlobisa phakathi kwemithi futhi inikeze izinsiza zokwenziwa nezinkontileka ngemishini eminingi eyaziwayo futhi;; Asigcini ngemishini yokukhiqiza kuphela, kepha futhi sinikezela ngezinsizakalo zokuphuma konke kwefekthri, ukwakhiwa kobunjiniyela, ukuvuselelwa kabusha kwefekthri nokunwetshwa, ukubonisana ngokuphathwa kwamaphrojekthi, ukwakhiwa kwephrojekthi njll.;
Isisetshenziswa Esikhulu Nokwazisa Umsebenzi:
I-Blender: Isetshenziselwa kahle ukuxuba i-powder ne-powder, i-powder exutshwe nenani elincane le-ketshezi Ngokukhokhiswa kwe-liquid, iMaxwell Imboni yakhelwe indlela yokufafaza enempilo enokulinganisa ukuze ithuthukise ukusebenza kahle kanye nokufana; I-mixer inezincazelo eziphelele ezisukela kuhlobo lwelabhoratri luhlobo lokukhiqiza, uhlobo oluqonde mpo noma uhlobo oluvundlile ngezinketho zakho.Ungakhetha umshini ofanele kakhulu ngokuya ngenqubo yokukhiqiza nezakhiwo zezinto ezibonakalayo (usizi, isisi, njll).
Ukuvula Nokupakisha Izinsiza: Kuqukethe idivayisi encane yokufaka isikhwama kanye nethoni futhi kungahlukaniswa kube uhlobo oluzenzakalelayo noluzenzakalelayo.
I-Conveyor: iqukethe ukudluliswa kwe-pneumatic (ingcindezi ecindezelayo nengcindezi engemihle, isigaba esiminyene, isigaba sokuhlanza) kanye nesihambisi esisebenza ngomshini (isikulufa, ibhakede, iketanga lensimbi nebhande). ;
Umshini wokupakisha: ufaka isikhwama se-valve nomshini wokupakisha isikhwama ovulekile ophezulu. Ngokusekelwe ebangeni lokugcwalisa, ihlukaniswe yaba ngu-5kg, kuze kube ngu-50 kg nokufakwa kwephakethe lethoni. ;
I-Emulsifier ephezulu ye-shear:i-dispersion, homogeneous, emulsation, ukucolisiswa kwezithasiselo zokudla, ngokuya ngefomu, zingahlukaniswa zaba yizinhlobo ezimbili: uhlobo lwe-batch nohlobo lwe-inline; ngokuya ngenqubo yokukhiqiza, ingahlukaniswa ngokugeleza okusheshayo kwe-emulsifier, i-emulsifier engu-Up-spray, i-emulsifier ephezulu ye-shear, i-emulsifier eqinile ye-liquid, njll .; Imiklamo ehlukahlukene enjenge-vacuum kanye nokushisa iyatholakala ukufeza izidingo ezahlukahlukene zenqubo.
Amasistimu we-Powder ne-Liquid Delivery Systems: i-powder pneumatic edlulisela (ingcindezi enhle, ingcindezi engemihle, isigaba esiminyene, isigaba sokuhlikihla), i-mehendi ehambisa imishini (eyindilinga, amabhande, ibhakede, njll.); ingcindezi ye-liquid emihle nengcindezi emibi edlulisa, ukupompa.
I-Powder, i-Liquid Batching System: kufaka phakathi "indlela yokukhuphula", "indlela yokwehla", "indlela yevolumu" nezinye izindlela zokulwa.
Isikhathi sokuthumela: Jun-19-2020